#Xildhibanadda ka soo jeeda Somaliland oo ka socda xukumadda Jabuuti oo la kulmay Biixi - Get Latest News From Horn of Africa
#Xildhibanadda ka soo jeeda Somaliland oo ka socda xukumadda Jabuuti oo la kulmay Biixi
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wefti xildhibaanno ah oo ka socda waddanka Jabuuti, kuwaas oo Somaliland u tagay ka-qaybgalka munaasibaddii 18-ka May oo si ballaadhan looga xusay guud ahaanba Somaliland.
Kulankan oo ka qabsoomay xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland, ayuu ugu horrayn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi si mug leh uguga mahadnaqay weftiga xildhibaannada ah ee ka socda waddanka Jabuuti sida ay xilkasnimada iyo walaaltinimada leh ee ay shacabka reer Somaliland ugala qaybgaleen munaasibadda 18-ka oo ah maalin ay guud ahaanba bulshada Somaliland si weyn ugu dabbaal-degaan.
Xubnaha weftiga, ayaa dhankooda madaxweynaha soo gaarsiiyey dhambaal hambalyo iyo salaam ah oo ay ka sideen madaxda kala duwan ee dalka Jabuuti, waxana ay madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka Somaliland ku ammaaneen Dimuqraaddiyadda iyo xasilloonida ka hana-qaadday dalka oo ku sifeeyeen mid tusaale u noqon karta dalalka geeska Afrika sida ay sheegeen.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, ayaa dhankiisa ku dheeraaday xidhiidhka soo jireenka ah ee walaaltinimada, derisnimada, ganacsiga iyo dublamaasiyadda ku dhisan ee ka dhexeeya Somaliland iyo dalka Jabuuti, waxana uu hoosta ka xarriiqay in ay madaxweyne ahaan ka go’an tahay taabbo-gelinta xidhiirkaas iyo ka miro-dhalintiisuba.
Weftiga xildhibaannada ah ee ka socda dalka Jabuuti, ayaa kamid ah wufuud kala duwan oo waddamo badan oo adduunka ah ka kala socotay, kuwaas oo dalka u yimi inay shacabka kala qayb-galaan dabbaal-degga munaasibadda 18-Ka May waxaana dhawaan Somaliland.